Sekoly Ara-baibolin’i Gileada—Fizarana Diplaoman’ny Kilasy Faha-133
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Hindi Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tamoul Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Fizarana Diplaoman’ny Kilasy Faha-133 Amin’ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada
Asabotsy 8 Septambra 2012
Mpianatra 48 no nahavita fiofanana tamin’ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada, tany amin’ny foibem-pampianaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Patterson, New York, rehefa avy nianatra mafy nandritra ny dimy volana. Olona 9 694 no nanatrika an’ilay fandaharana, anisan’izany ny havana aman-tsakaiza.
Mpitory za-draharaha 8 000 mahery no efa nampiofanina ho lasa misionera, nanomboka tamin’ny 1943. Natao hanatanjahana ny finoan’ny mpianatra ilay fiofanana, ary natao hanampiana azy ireo hanana ny toetra kristianina ilaina mba hiatrehany ny olana fahitan’ny misionera, ka ny Baiboly no boky tena ampiasaina amin’izany.
“Hevero Tsara Izay Mahatehotia.” I Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, no mpanolotra fandaharana. Niorina tamin’ny Filipianina 4:8 ny lahateny fanokafana nataony, manao hoe: “Na inona na inona mahatehotia, ... dia izany foana heverina.”
Nohazavain’ny Rahalahy Morris fa tsy ho kivy isika raha mihevitra na misaintsaina zavatra mahatehotia, na dia miaina eto amin’ny tontolo tsy mahatehotia aza. Hoy izy: “Aoka ianareo ho mailaka hitady zavatra mahatehotia, ary aoka ianareo ho mahatehotia.”
Modely ho antsika, ohatra, ilay Raintsika any an-danitra. Tsy mifantoka amin’ny fahadisoantsika izy. (Salamo 130:3) Hoy ny Rahalahy Morris: “Aza mifantoka amin’ny fahadisoan’ireo rahalahy sy anabavy. Aoka ianareo ho mahatehotia foana.”
“Mahazoa Fahalalana Nefa Tandremo Sao Lasa Hendry Loatra.” Niorina tamin’ny Mpitoriteny 7:16 ny famelabelaran’i Harold Corkern, anisan’ny Komitin’ny Sampan’i Etazonia. Tian’Andriamanitra hampiasa ny fahalalana araka ny tokony ho izy isika, ary tsy tiany raha lasa mahatonga antsika hihevi-tena ho ambony noho ny hafa ny fahalalantsika.
Nohazavain’ny Rahalahy Corkern koa hoe ilaina ny fitiavana rehefa manitsy na manome torohevitra. Tsy tokony hihoatra an’izay antenain’Andriamanitra amin’ny olona ny zavatra antenaintsika avy amin’izy ireo. Hoy ny Rahalahy Corkern: “Ampiasao tsara ny fahendrena sy fahalalana ary fahiratan-tsaina anananareo, dia hahafinaritra an’ireo rahalahy ny miaraka aminareo.”
“Aza Manadino ny Zavatra Nataon’Andriamanitra.” (Salamo 78:7) Nanazava i Guy Pierce, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, hoe manahaka ny ray aman-dreniny ny ankizy, na tsara ny toetran’izy ireo na ratsy. (Ohabolana 20:11) Manahaka an’ilay Raintsika any an-danitra koa isika. “Izao no ahitana miharihary izay zanak’Andriamanitra sy izay zanaky ny Devoly: Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin’Andriamanitra.”—1 Jaona 3:10.
Nilaza ny Rahalahy Pierce fa nasaina hanatrika ny Sekolin’i Gileada ireo mpianatra satria nanana toetra tsara, anisan’izany ny fanetren-tena. Nampahatsiahiviny izy ireo hoe tokony hanetry tena foana. Tsy hoe lasa ambony noho ny hafa izy ireo noho ny fiofanana azony. Vao mainka tsara toerana izy ireo mba hampiray saina kokoa an’ilay fianakaviana maneran-tany misy azy ireo, ary ho modely amin’ny fanetren-tena. (Salamo 133:1) Hoy ny Rahalahy Pierce: “Mbola ho afaka hianatra foana ianareo ka hampitombo ny fahalalanareo sy ny fahatakaranareo momba an’i Jehovah Andriamanitra.”
“Izay Tokony ho Nataonay no Nataonay.” Nametraka an’izao fanontaniana izao i William Samuelson, mpiandraikitra ny sampan-draharahan’ireo sekoly ara-baiboly any Patterson: “Ahoana no hataontsika raha voatendry hanao zavatra tsy tiantsika isika?” Azontsika andraisana fianarana ilay voalaza ao amin’ny Lioka 17:7-10 hoe: “Rehefa vitanareo izay rehetra nasaina nataonareo, dia lazao hoe: ‘Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tokony ho nataonay no nataonay.’” “Tsy mahasoa” tokoa isika, izany hoe tsy misy dikany, raha ampitahaina amin’ilay Tompontsika, dia i Jehovah.
Nianatra tao an-dakilasy nandritra ny herinandro maro ireo mpianatra ary nety ho sarotra ho an’ny sasany izany. Hoy ny Rahalahy Samuelson: “Izay tokony ho nataonareo anefa no nataonareo, ary hitanareo izao hoe nahasoa anareo ilay izy satria nampitombo ny finoanareo.” Hoy izy teo am-pamaranana: “Mpanompo azo itokisana ianareo ka enga anie hankafy foana ny tombontsoanareo hanompo an’ilay Tompon’izao rehetra izao.”
“Tadidio ny Toky Nomen’i Jehovah Rehefa Misy Olana.” Nampiomana an’ireo mpianatra i Sam Roberson, mpanampy ny mpiandraikitra ny sampan-draharahan’ireo sekoly ara-baiboly any Patterson, hoe tsy maintsy ho kivy izy ireo indraindray. Nampirisihiny àry ireo mpianatra mba hitadidy an’ireo olona maro tantarain’ny Baiboly hoe nahazo toky avy tamin’Andriamanitra. Nanome toky an’i Josoa, ohatra, i Mosesy hoe: “Tsy handao anao [i Jehovah] ary tsy hahafoy anao mihitsy.” (Deoteronomia 31:8) Afaka niteny toy izao i Josoa talohan’ny nahafatesany: “Tsy nisy tsy tanteraka na iray aza ny fampanantenana rehetra nolazain’i Jehovah Andriamanitrareo taminareo.”—Josoa 23:14.
Mampanantena ny mpanompony i Jehovah Andriamanitra hoe: “Tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafoy anao velively.” (Hebreo 13:5) Manome toky antsika izy fa hanao zavatra mifanaraka amin’ny dikan’ny anarany hoe Jehovah (“Manao Izay Hahatonga Izy”) ka ho tonga izay rehetra ilaina mba hikarakarana ny mpanompony. Hoy ny Rahalahy Roberson: “Aza mivadika mihitsy na inon-kidona na inon-kihatra. Tadidio fa tsy hanary antsika na oviana na oviana izy.”
“Efa Nivoaka Eran-tany ny Feony.” (Romanina 10:18) Nampian’i Mark Noumair, mpampianatra, ireo mpianatra avy any amin’ny firenena samihafa ka nitantara na nanao fampisehoana ny zavatra nahafinaritra azy ireo rehefa nitory teny amin’ny tanàna manodidina an’i Patterson. Faly, ohatra, ny mpivady iray avy any Afrika Atsimo rehefa nihaona tamin’ny vehivavy telo avy any amin-dry zareo, sy niresaka tamin’izy ireo tamin’ny teny zoloa sy xhosa. Ny mpivady iray avy any Sri Lanka kosa nihaona tamin’ny lehilahy karàna iray ary mipetraka any Sri Lanka ny vady aman-janany. Tsy mbola nahita Baiboly mihitsy ilay lehilahy ka faly izy mivady nanome azy ny iray tamin’ny Baiboliny.
“Ampy Fitaovana ho Amin’ny Asa Tsara Rehetra.” Nanadinadina mpivady roa i Gene Smalley, mpanampy ny Komitin’ny Fanoratana. Notantarain’ilay mpivady avy any Sierra Leone fa tsy maintsy mantsaka rano izy ireo isan’andro. Tsy misy dikany amin’izy ireo anefa izany raha ampitahaina amin’ny fifaliana tsapany rehefa mampianatra Baiboly an’ireo olona liana 50. Samy nilaza ny fankasitrahany ireo mpianatra efatra ireo satria nanampy azy ireo ho ampy fitaovana ho amin’ny asa tsara rehetra any amin’izay mety hanendrena azy ilay sekoly.—2 Timoty 3:16, 17.
“Miareta Hatramin’ny Farany sy Aorian’izay.” I Gerrit Lösch, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao ny lahateny fototra. Nohazavainy teo am-piandohan’ilay lahateny hoe inona no ataon’ny mpanao hazakazaka lavitra ezaka mba ho azony antoka hoe ho vitany tsara ilay hazakazaka. Iray ihany no mandresy amin’ny fifaninanana toy ireny. Izay rehetra maharitra hatramin’ny farany kosa no mandresy amin’ny hazakazaka kristianina.
Manompo an’i Jehovah foana ny olona miaritra, ary tsy manary toky rehefa misy olana na fanenjehana na fitsapana na fahadisoam-panantenana. Hoy i Jesosy: “Izay miaritra hatramin’ny farany no hovonjena.” (Matio 24:13) Tena mahafinaritra ny mahalala hoe hitan’i Jehovah sy Jesosy ny fiaretantsika. Noresahin’ny Rahalahy Lösch avy eo ny zavatra maromaro afaka manampy antsika hiaritra na dia misy olana aza. Ireto ny sasany amin’izany:
Mivavaha amin’Andriamanitra izay “manome fiaretana” sy “mitondra ny entantsika isan’andro.”—Romanina 15:5; Salamo 68:19.
Aoka ianareo ho tapa-kevitra ny tsy hilavo lefona fa hatoky hoe ‘tsy mivadika amin’ny teniny Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa rehefa misy fakam-panahy dia hasiany lalan-kivoahana koa, mba hahazakanareo izany.’—1 Korintianina 10:13.
Ataovy an-tsaina foana ny fanantenanareo. “Niaritra hazo fijaliana [i Jesosy] noho ilay fifaliana natao teo anoloany.”—Hebreo 12:2.
Nohamafisin’ny Rahalahy Lösch fa amin’izao fotoana efa anakekezan’ny farany izao indrindra isika no tena tsy tokony hivadika. “Aoka isika hihazakazaka amim-paharetana amin’ilay hazakazaka eo anoloantsika.”—Hebreo 12:1.
Nisy solontenan’ny mpianatra namaky taratasy fisaorana, teo am-pifaranan’ny fandaharana. Nankasitraka ny fiofanana tsara azony izy ireo tao amin’ilay taratasy. Voalaza tao hoe lasa nahatakatra bebe kokoa ny fikasan’Andriamanitra sy nanana finoana matanjaka kokoa izy ireo, rehefa nandalina ny voalazan’ny Baiboly araka ny fotoana nisehoany. Hoy izy ireo: “Tapa-kevitra izahay fa hampihatra an’ireo zavatra tsara nianaranay.”
Ny Kilasy Faha-133 Nahazo Diplaoman’ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada
Amin’ilay lisitra eto ambany, ireo laharana dia asiana nomerao avy eo aloha mankany aoriana, ary ireo anarana dia tononina avy eo ankavia miankavanana isaky ny laharana.
Salanisan’ny taona nahavitan’ny batisa: 21,9
Tany nanana solontena: 21
Video: Fizarana Diplaoman’i Gileada—Kilasy Faha-133
Video: Fanadinadinana: Sekolin’i Gileada, Kilasy Faha-133